damqa oo baraaruga
Subject: damqa oo baraaruga Sun Feb 14, 2010 3:22 am
Date: Fri, 8 Jan 2010 05:03:26 +0000
Aafadii Afrikada bari ka socotay ayaa weji kale yeelatay kadib markii birimagaydadii dhibbanayaasha ahaa xubnaha jirkooda ugu muhiimsan si aan loo meel dayin la isaga jarjaray, xaalna uu noqday anaa kaa itaal roon iyo inay iska aamusaan duqowdii ummada ee duubka u xiran jirtay deminta colaadaha, ka hortaga falalka gurucan iyagoo ahaa kuwa dhabarooda lagu waabto marka ay argagixiso jirto balse maxaa ku kallifay inay afka iyo gacanta isa saartaan !?
Duqowdii dhaqanka afkii baa juuqda gabay markii dhowr baaq nabadeed iyo isku dayo kalaba ay fashal ku soo dhamaadeen dhagna jalaq loo siin waayay illaa ay naftooda u yaabeen qaarkoodna ay iil u galeen.
Muwaadinka Soomaaliga ah raasumaalka kaliya ee maanta uu ifkan ka fiirsanayo waa lixaadiisa oo ah; kasabka quudkiisa, ku amaan gelinta naftiisa mawjadahan dagaalada ah, dhamaystirka quruxdiisa, milkiga uu ku faano kagana difaaco naftiisa wax walba oo cadow ah ku ah jiritaankiisa loomase fiirin.
Ma malaysan kartaa uur ku taalada uu dareemayo ruux lixaadiisa qaar ka mid ah ku waayay u awood sheegasho ? ma qiyaasan kartaa ereyada oohinta leh ee uu iskula sheekeysanayo dhibbanahaas ? ma sawiran kartaa dareenkiisa marka uu u baahdo qof ku kaalmeeya howl uu kali qabsan jiray ? innaba maku fikirtay cuqdada baaxadda leh ee qofkaas ku siyaadaysa markasta ee uu arko qofkii waxyeeleeyay ? dhibbanayaashu wey cawdeen oo lama caawin, wey taaheen oo lama maqlin ilaa ay ku sigteen inay indhahooda ilmo u dhamaadaan. in badan oo naga mid ah ma aysan xaadirin qof naafo ah oo kaligii ku soo haray goob colaado ah markii uu baxsan waayay.... Alla uur ku taalo badanaa !!!!
Dhab ahaan xaaladu ka xun kana murugo weyn inta aad ku fikirteen ama aad malaysateen.
Waalidiinta gabowga ah, carruurta da'da yar iyo marasta shacabka ayaa maraya xaalad adigoo harsan waayay malaguu soo hergalay ah bacdamaa intii reerahooda ka tirsanayd daryeelkoodana u taagnaa Ilaahna uu ka badbaadiyay inay xubnahooda ku waayaan madaafiicda habowga ah iyo rasaasta wiiftada ah inta loogu tegay meelaha ay gabbaadka ka dhigteen si aan naxariis lahayn loogu daray liiska aan xisaabta lahayn ee naafada soomaaliyeed.
haddaba gacan goynta oo ah xad ka mid ah xuduudaha ilaahay uu u jideeyay in la amaan geliyo hantida dadweynaha ayaa waxay su'aali ka taagantahay waqtigan la joogo ma tahay in la fuliyo ? imisa ayuuse la egyahay nisaabka (qiimaha) gacan goynta? su'aalo badan marka aad iska weydiiso xaaladan ayaa waxaa kuu soo baxaya in uu jiro degdeg saa'id ah iyo in qof walba oo degaan ka taliya uu u dhigay sida ay la noqotay.
Waxaa hubanti ah inay jiraan masuuliyiin ka tirsan ururka ay ka tirsanyihiin ragga howlahan fulinaya oo aan la dhacsanayn fikrada xuduud oogida ah waqti xaadirkan balse daad socda laga hor imaan kari maayee dhankooda ayay ka raaceen markay dani yeelsiisay waxayse ku haboonaan lahayd in dib loo yara dhigo dhowr qodobna il gooni ah lagu fiiriyo:
1: Barakicii ugu badnaa oo ka dhacay Koofurta Soomaaliya tan iyo sanaddii 1991-kii, iyadoo dadka bara kacayna aysan jirin cid ay u qaxeen ama ay kaalmo ka sugayaan.
2: Aabaarihii dalka ka jiray oo gaaray heerkii ugu xumaa iyadoo aysan di'in roobab lagu doogsagay saddexdii sano ee ugu danbeysay walow roobab aan la wada helin ay dhowr maalin meelo faro ku tiris ah ku hooreen.
3: Lacagta shilin soomaaliga oo gaartay qiimo dhac heerkii ugu hoseeyay, reeraha qaar ayaa hal mar in ka badan aanan gowska waxba saarin maalintoo idil iyagoo eersanaya shaqo la'aanta dadka wada ekeysay iyo lacagta qiimaha beeshay ee aan waxba goyn, carruurtoodana ay qarka u saaranyihiin inay macluul u dhintaan.
Dhab ahaan marka la eego xaalada sheegida ka dhan ee shacabka Soomaaliyeed uu maanta marayo waxa uu mudanyahay in loo dhimriyo, dhaqaalaha dagaalada lagu sii hurinayana dabka loogu shido, waraabe dhar soo gashtay ayaase go'aan ku gooyay inay xubnahooda sahashi ku waayaan. runtii.......................
Gaal maxasta kuu dhowra ood magansataa dhaama.
Cadow sokeeye waxa uu kaga duwanyahay mid shisheeyana dadweynahaa la weydiin !!!
W/Q: C/naasir Maxamed Axmed (Zero)
Subject: Re: damqa oo baraaruga Mon Mar 15, 2010 6:23 pm
C/xaafid waa mahadsantahay saaxib. Laakin wiilka mowduucaan qoray oo saan u qurxiyay, ma u fahmi karaa hadafkiisa inuu yahay inuu gacan goonta uu diido oo kaliya. Waxba waxaa ka sii yaab badan, CAJIIIIIIIIIIIIIIB!!!